Celebrating King's Day In The Netherlands (ရှငျဘုရငျ၏) | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > အဆိုပါနယ်သာလန်ခုနှစ်တွင် King ရဲ့နေ့ကိုဂုဏ်ပြုသော (ရှငျဘုရငျ၏)
နယ်သာလန်ဘုရင်၏နေ့ကိုဂုဏ်ပြုသောကောင်းစွာဟော်လန်မှာအကောင်းဆုံးပါတီဖြစ်နိုင်သည်. အပေါ် 27 ဧပြီလ, သူတို့ဂီတနှင့်အတူဘုရင်က Willem-Alexander ကရဲ့မွေးနေ့ကျင်းပ, လမ်းပေါ်ပါတီများ, ခွေးလှေးစျေးကွက်, နှင့်ပျော်စရာဝိုင်း. ရှငျဘုရငျကိုမိမိနှင့်အတူတိုင်းပြည်ကတဆင့်ခရီး မိသားစု. ဘုရင့်နေ့မတိုင်မီညတွင်, ဘုရင့်ညနှင့်အတူကျင်းပခဲ့သည် ဂီတပြပွဲ အဆိုပါဟိဂ်နှင့်အခြားမြို့ကြီးများနှင့်နိုင်ငံ၏အကြီးမားဆုံးခွေးလှေး၌တည်၏ ('' အခမဲ့ '') Utrecht အတွက်စျေးကွက်. ကအားလုံးကိုအကြောင်းကိုဖွင့်အဘယျသို့ထွက်ရှာတွေ့ဖို့အဆင်သင့်? သငျသညျဖွစျသငျ့အဘယ်ကြောင့်ဤနေရာတွင်င် နယ်သာလန်ဘုရင်၏နေ့ကိုဂုဏ်ပြုသော.
*မှတ်စု! ဘုရင့်နေ့သာတစ်လကွာသည်. ယခုသင်သည်နယ်သာလန်၌ဘုရင်၏နေ့ကျင်းပရန်သင်၏အမ်စတာဒမ်ဟိုတယ်ကိုဘွတ်ကင်လုပ်ရန်အချိန်ဖြစ်သည်. လူအပေါင်းတို့သည်နယ်သာလန်ကျော်ကနေဧည့်သည်, နှင့် ပို. ပို. ပြည်ပမှာစာအုပ်အနေဖြင့်အစောပိုင်းခန်းရရှိနိုင်ပါသည်သေချာစေရန်.
မူလက, မင်းသမီးနေ့ Wilhelmina ရဲ့မွေးနေ့အပေါ်ဟော်လန်ကျင်းပခဲ့သည် (31 သြဂုတ်လ), သူမပါသေးတဲ့မင်းသမီးလေးအခါ. အဆိုပါပါတီကအများအပြားအစိတ်အပိုင်းများခဲ့, အပါအဝင်; ကလေးအတော်များများရဲ့ဂိမ်းများနှင့် အလှဆင်လမ်းများ. Wilhelmina မိမိအဘ၏အသေခံပြီးနောက်အသစ်သောမိဖုရားဖြစ်လာခဲ့သည့်အခါ, ဒါဟာဘုရင်မကြီးရဲ့နေ့သို့ပြောင်းလဲခဲ့သည်.
ဂျူလီယန်, လာမယ့်မိဖုရားနှင့် Wilhelmina ရဲ့သမီး, ဂုဏျဘုရင်မကြီးရဲ့နေ့တွင် 30 အပေါ်ချီတက်ပွဲနှင့်အတူပြီလ Soestdijk. Beatrix ထို့အပြင်အပေါ်ဘုရင်မကြီးရဲ့နေ့ကျင်းပခဲ့သည် 30 ဧပြီလ (သူမ၏ကိုယ်ပိုင် မွေးနေ့ ဇန်နဝါရီလတွင်ဖြစ်ပါတယ်) ဒါပေမယ့်သူမ၏မိခင်မှဆန့်ကျင်, သူမကသူမ၏မိသားစုတစ်စုလုံးကို ယူ. တိုင်းပြည်တစ်ဝှမ်းခရီးထွက် အများအပြားမြူနီစီပယ်သွားရောက်ကြည့်ရှုရန်. ရှငျဘုရငျ Willem Alexander က ဒီအစဉ်အလာကိုလိုက်နာခဲ့သည်. သူရက်နေ့တွင်မွေးဖွားခဲ့သည် 27 ဧပြီလ နှင့်ဤအတွက်တရားဝင်နေ့ဖြစ်လာခဲ့သည် 2014 နယ်သာလန်ဘုရင်၏နေ့ကိုဂုဏ်ပြုသောများအတွက်.
နယ်သာလန်ဘုရင်၏နေ့ကိုဂုဏ်ပြုသောအပေါ် Orange အရာအားလုံးကို!
အဆိုပါဒတ်ခ်ျတော်ဝင်မိသားစုကိုနာမတျောကိုသမုတ်သော: လိမ္မော်ရောင်၏အိမ်. ဤသည်စာသားအရောင်ကိုလိမ္မော်ရောင်ကိုဆိုလိုသည်. ရလဒ်အနေဖြင့်, ကဟော်လန်ရဲ့အမျိုးသားရေးအရောင်ဖြစ်လာသည်. King ရဲ့နေ့တွင်, သငျသညျလူတိုငျးအခြို့သောလမ်းသို့မဟုတ် form မှာလိမ္မော်ရောင်ဝတ်ထားတွေ့ပါလိမ့်မယ်. ဒါကြောင့်, ရယူ စျေးဝယ်!
နယ်သာလန်ဘုရင်၏နေ့ကိုဂုဏ်ပြုသောနေစဉ်, လူတွေကိုခွင့်ပြုချက်မလိုဘဲလမ်းပေါ်မှာသောအရာတို့ကိုရောင်းဖို့ခွင့်ပြုနေကြတယ်. အခမဲ့ ခွေးလှေးစျေးကွက် ပန်းခြံများနှင့်လမ်းများပေါ်တွင်ကျင်းပကြသည်, များစွာသောလူတို့သည်မိမိတို့မလိုချင်တဲ့ဥစ္စာကိုပူဇော်သက္ကာဘို့နှင့်အတူ, ဂီတ, ရောင်းချရန်သို့မဟုတ်အခြားဖျော်ဖြေရေး. တစ်ဦးကားဂိုဒေါင်ရောင်းချအဖြစ်ကစဉ်းစားပါ, ဒါပေမယ့်အများကြီးပိုကြီးတဲ့စကေးအပေါ်! Utrecht အတွက်, အဆိုပါခွေးလှေးစျေးကွက်ပင်ဘုရင့်နေ့မတိုင်မီညဉ့်ကိုစတင်ရန်. ဒီတော့ပေါ်တွင်သင်၏လမ်းလျှောက်ဖိနပ် get.
'S toasted နယ်သာလန်ဘုရင်၏နေ့ကိုဂုဏ်ပြုသောမှကွစို့!
တိုင်း ထိုပွဲကိုခံ တစ်ဆန္ဒပြုရန်လိုအပ်သည်! မှန်သော? King ရဲ့နေ့တွင်, လူအခါးသီးသောလိမ္မော်ရောင်နှင့်အတူရှင်ဘုရင်အားတစ်ကင်လုပ်, တောက်ပတဲ့လိမ္မော်ရောင် liqueur. ဒါပေါ့, ဒီလိမ္မော်ရောင်ဝတ်ထား၏အစဉ်အလာနှင့်အတူစောင့်ရှောက်, လွန်း! အဆိုပါသောက်စရာအတွက်ဖန်တီးခဲ့ 1620 မင်းသား Fredrick ဟင်နရီရဲ့အောင်ပွဲဆင်နွှဲရန်. အစပိုင်းတွင်, ကလူသိများတဲ့မဟုတ်ခဲ့ပေမယ့်လိမ္မော်ရောင်၏ဝီလျံကိုပထမဦးဆုံးဘုရင်ဖြစ်လာတယ်ပြီးနောက်, ဒါဟာတစ်ချိန်ကကိုပိုပြီးထုတ်လုပ်ခဲ့သည်. ထိုကတည်းက, လိမ္မော်ရောင်နီးကပ်စွာဒတျချြတော်ဝင်မိသားစုနှင့်အတူခါးသီးသောဆက်စပ်လျက်ရှိသည်.
WE WHAT ကိုသောက်? ဘီယာ, ဒါပေါ့!
ဟော်လန်သူတို့ရဲ့အရက်များကိုချစ်သောသူနှင့် Heineken အားဖြင့်စမတ်စျေးကွက်၏ဆယ်စုနှစ်ပြီးနောက်, သူတို့ရဲ့ဒတျချြစီးပွားဖြစ်မာနထောင်လွှား, လူတိုင်း King ရဲ့နေ့စဉ်အတွင်းနတ်ဘုရားများ၏ foamy ချိုမြိန်ဝတ်ရည်အပေါ်ချိတ်ဆက်နေသည်.
အဘယ်သူမျှမ ဘီယာဖန်ခွက် အပြည့်အဝကျန်ရစ်နေသည်, စိတ်ထဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းကျန်ကြွင်းသောအဘယ်သူမျှမ. တကယ်ချသင့်ရဲ့ဆံပင်စေတဲ့နေ့ကအစဉ်အဆက်လည်းမရှိဆိုပါက, ဒီကပါလိမ့်မယ်! ထိုသို့ဖွင့်ဘုရင့်နေ့မဟုတ်ပါဘူး, ရှေ့တော်၌ထို King ရဲ့ညတစ်ဝက်ပျော်စရာဖြစ်ပါတယ်. ဒါဟာပုံမှန်အားဖြင့်ဘုရင့်နေ့အဖြစ်အလုပ်ရှုပ်နေမယ့်အနုတ်ကလေးတွေနှင့်မိသားစုများ. ဆိုလိုသည်မှာသင်၏ဘီယာဖိတ်ရန်တားဆီးမှုလျော့နည်းခြင်းပင်ဖြစ်သည်, သင်၏စကားကိုကြွေးကြော်ရမည်.
နယ်သာလန်ဘုရင်၏နေ့ကိုဂုဏ်ပြုသောမဟုတ်မှသာစိုက်ပျိုး-ups အဘို့ဖြစ်၏. အဆိုပါများအတွက်မြို့အနှံ့အရပ်ဌာနတာလှုပ်ရှားမှုများအများအပြားရှိပါတယ် ငယ်ရွယ် နှင့်နှလုံးမှာငယ်ရွယ်မျက်နှာ-ပန်းချီအပါအဝင်, ဂိမ်းများ, နှင့် အားကစား ဖြစ်ရပ်များ. ပိုမိုသိရှိလိုပါကများအတွက်ဘုရင့်နေ့မိသားစုပျော်စရာစာမျက်နှာကိုစစ်ဆေးပါ.
ပဲရစ် The Hague မြို့တွင်မီးရထားမှ
King ရဲ့ည & နေ့ပါတီများ
နယ်သာလန်ဘုရင်၏နေ့ကိုဂုဏ်ပြုသောငြိမ်ဝပ်စွာနေရသောနေ့ရက်အများပြည်သူအားလပ်ရက်ပေမယ်ဆက်ဆက်မရ. ဒတျချြ, ဟောင်းများ, ခရီးသွား ists ည့်သည်များအနေဖြင့်အမ်စတာဒမ်ကိုအခမ်းအနားတစ်ခုသို့စုရုံးကြသည်. အဆိုပါပျော်စရာအစဉ်အလာကြီးနေ့၏အကြိုအပေါ်ကစတင်ခဲ့သည် (King ရဲ့ည) ဘုရင်၏နေ့၌မြို့အနှံ့ဆက်လက်နှင့်အတူပွဲတော်လေထုအတူ. DJs အများပြည်သူရင်ပြင်ပေါ်ပါတီများ play, တောက်ပလှပသောလှေများသည်တူးမြောင်းများကိုဖြည့်ဆည်းပေးသည်, နှင့်ဂီတမှလမ်းများပေါ်သို့ယိုဖိတ် ကဖီးဟင်းလင်းပြင်. ဘုရင်၏နေ့ဖြစ်ရပ်များအကြောင်းပိုမိုဖတ်ပါ.
gridlock အသွားအလာသိပ်ပျော်စရာခဲ့ဘယ်တော့မှမ! King ရဲ့နေ့တွင်, တောက်ပအလှဆင်လှေထောင်ပေါင်းများစွာ၏ကျဉ်းမြောင်းအမ်စတာဒမ်တူးမြောင်းထုပ်ပိုး. hot သိကောင်းစရာ. ကြိုတင်မဲအတွက်တစ်လှေဘွတ်ကင်လုပ်ရန်!
မြို့လယ်ခေါင်မှတစ်ဆင့် ၁.၅ နာရီကြာတူးမြောင်းဖြင့်အမ်စတာဒမ်တွင်နှစ်စဉ်ဘုရင့်နေ့ကိုတက်ရောက်ပါ. အဆိုပါတောက်ပအလှဆင်စက်လှေမှာအံ့ဩခြင်းနှင့်န့်အသတ် onboard အဖျော်ယမကာကိုခံစား.
– ရှည်ကြာခြင်း 90 မိနစ်များ
– မျဉ်း Skip
ဒတျချြ, ဟောင်းများ, နှင့်ခရီးသွား al ည့်ရောနှောနယ်သာလန်မှာရှိတဲ့ King's Day ကျင်းပဖို့အမ်စတာဒမ်မှစုပြုံ. သင်ပျော်စရာအပေါ်ထွက်လက်လွတ်မသေချာအောင်လုပ်ပါ, အသုံးပြုဖို့ယခုစာအုပ်ဆိုင် တစ်ဦးကရထား Save အဘယ်သူမျှမဝှက်ထားသောအခကြေးငွေများနှင့်အဖြစ်လွယ်ကူသော 1, 2, 3!
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. ရုံဤ blog post မှ link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုခရက်ဒစ်ပေးနိုင်ပါသည်ဖြစ်စေ, သို့မဟုတ်သင်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fcelebrating-kings-day-netherlands%2F%3Flang%3Dmy - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
#KingsDay #ရှငျဘုရငျ၏ #traveleurope europetravel ရထားခရီးသွား travelamsterdam netရာဝတီ traveltips